ज्योति लाईफको मालामाल हुने आईपीओ ! शुक्रबारबाट निश्कासन हुँदै, कति दिने आवेदन ? - Arthasansar
ज्योति लाईफको मालामाल हुने आईपीओ ! शुक्रबारबाट निश्कासन हुँदै, कति दिने आवेदन ?
विहीबार, २० फागुन २०७७, १५ : ३१ मा प्रकाशित
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले फागुन २१ गते अर्थात शुक्रबारदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निश्कासन तथा बिक्री खुल्ला हुँदैछ ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ६६ करोड रूपैयाँ बराबरको ६६ लाख कित्ता आइपिओ निश्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो ।
जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ३० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुलाई, ३ लाख ३० हजार कित्ता कर्मचारीहरुलाई र बाँकी रहेको ५९ लाख ४० हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि छुट्टाइएको छ ।
लगानीकर्ताले एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, नक्साल, काठमाडौं, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि(आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै मेरो सेयर एप र मेरो सेयर सफ्टवेयर मार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । माग भन्दा धेरै आवेदन पर्ने भएकोले न्यूनतम १० कित्ता अर्थात एक हजार रुपैयाँ मात्र लगानी गर्दा हुनेछ ।
#jyoti bikash bank